Bertram Thomas: Taariikhyahan iyo Raiisel wasaarihii hore ee Muscat iyo Cumaan, ayaa ku soo warbixiyay buugiisa "Carabtu" Dadka Carabtu maahan Carab la yaqaan ee waqtigeenna, laakiin waa dad aad u madow | KONGOLISOLO
Posted By: KongoLisolowaa: Febraayo 13, 2020 05: 44 No Comments
Suunka 'anti-negroid' ee bini-aadamku wuxuu ku fiday adduunka qadiimka ah laga soo bilaabo Afrika illaa ala. Suunkaas (si ay u donné) Aqoonsaday dadyowga Reer Xamri ee Afrika, Dravidians of India, iyo dad madoow dhexdhexaad ah oo ku nool Jasiiradda Carbeed.
Black Arabia iyo asalka Afrikaanka ee Islaamka: Ilaah ma abuurin rag, wuxuu abuuray madow. Ragga ugu horreeya waxay ahaayeen madow. Magaalada Mecca waxaa aasaasay madow. Oo waxaa ka mid ahaa afar iyo labaatan nin oo xigmad leh. Uma ogolaanin inay la shaqeeyaan saaxiibadood, waxay aasaaseen qabiilka Shabazz, awoowayaasha American blacks.
Waxay ahayd qabiilkaan oo ku dhashay, oo ku saabsanaa 6 600 sano ka hor, mid gaar ah Yacoub, oo lagu naaneeso "madax weyn", sababtoo ah madaxiisa aan caadi ahayn iyo madaxdiisu. Sanadihii 18, wuxuu noqday mid si wanaagsan u lafaguray ka dib markii uu ka soo qayb galay dhamaan jaamacadaha Makka. Wuxuu bilaabay inuu ku wacdiyo. Waqtigaas, 30% dadka reer Mecca ma aysan ku qanacsaneyn diintiisa iyo xaaladiisa nololeed. Waxay ahayd qaybtan dadweynaha Yacoub.
Muddo ka dib, laba migrations weyn oo dadka iftiinka-maqaarka ayaa ka yimid waqooyiga. In la duuliyo oo loo beddelo suunka madow ee bini-aadamka ee ka shisheeya Hindiya (et) si loo wado gees gees u dhexeeya Hindiya iyo Afrika. Kuwa soo duulay ee sii xoog badan waxay ka adkaadeen dadka madow ee maqaarka leh, iyagoo badankood qaadanaya, kuwa kalena koonfur u socda.
Xaaladda dhaqameed ee dadka cusubi lama oga. Uma eka in ay ka badnaayeen duurjoogta ugaadhsadeyaasha adventurous.
Aug12 05: 17